Atsaharo ny fananganana lozisialy crappy - Rindrambaiko mifangaro mbola mandresy | Martech Zone
Ity misy zavatra tsy tadiavin'ny CIO anatiny sy ny ekipanao teknolojia anatiny hahafantaranao, ny fampiharana rindrambaiko 18 volana izay mitentina 500 $ fotsiny - $ 1MM dia azo atao mora vidy kokoa… ary tokony hisy izany. Manangana fiarovana amin'ny asa izy ireo satria ny ankamaroan'ny mpitarika sy mpivarotra haavo C dia tsy mahatakatra ny fomba fiasan'ny teknolojia sy ny tokony hiasan'izy ireo.
Amin'ny maha mpivarotra antsika rehetra dia maniry ilay rindrambaiko mitovy amin'ny unicorn isika. Ilay manao taratrafm, famoronana atiny, isa firaka, fanamafisana ny fiovam-po… oh, eny, ary manana Analytics sosona amboniny. Ary amin'ny maha mpivarotra sy teknolojia antsika dia te-hanangana rindrambaiko izahay satria resy lahatra fa tsy mahita izay ilainay. Ny zava-misy anefa dia afaka mahita manakaiky ny 90% amin'izay ilaintsika isika raha mijanona tsy mitady ilay unicorn amin'ny "vahaolana" lafo vidy sy lafo loatra ary manomboka mijery ireo rindrambaiko miompana amin'ny ampahany amin'ny vidiny.
Ka inona no tokony ho tadiavinao rehefa mampihatra fampiharana an-tranonkala tafiditra? Ireto ny zavatra telo tokony ho tadiavinao:
1) Ampidiro malalaka
Na mijery mpanome tolotra mailaka ianao, rindrambaiko fitantanana kaonty, na zavatra hafa eo anelanelany, dia tokony hitady serivisy mikambana malalaka ianao. Nahoana? Satria midika izany fa avelan'ny serivisy hampiasanao ny angon-drakitrao amin'izay tianao. Ny tsiambaratelo hampiasana serivisy rehetra dia ny fahafantarana fa foto-kevitra fototra iray - anao ny angona fa tsy ny serivisy. Orinasa te-hiditra amin'ny serivisy tsy tambo isaina dia mahatakatra izany ary manamora kokoa ny fampiasana ny serivisin'izy ireo.
2) Sokafy ny API
Na dia tsy mpamorona ianao ary mbola tsy naheno fisokafana API tokony hitady serivisy manana API misokatra ianao. Tsotra ny antony, mamela ny API hanorina serivisy sy vokatra eo ambonin'ny app-ny ny API. Nahoana no zava-dehibe izany? Ny antony lehibe iray dia ny famelana ny fampiasana famoronana ny rindrambaiko fototra. Na iza na iza dia afaka tonga ary manangana serivisy ilaina izay mety hanidy lavaka na hanome anao fotoana fanampiny. Ny antony lehibe hafa dia hoe afaka manangana eo amboniny ianao. Tadidinao ve ilay unicorn noresahiko teo aloha? Raha manana ny lozisialy teknika ianao na ny loharanom-pahalalana dia azonao atao ny manangana eo ambonin'ilay fampiharana, na mampiasa angona amin'ny fomba tianao. Ny Open API dia manome ny mpamorona rafitra iray hiasa ary tsy hamporisika anao hanangana na hanangana serivisy.
3) Vondrom-piarahamonina mavitrika
Ny iray amin'ireo zavatra manaitra indrindra hitako niasa tamin'ity indostria ity dia ny fananan'ny orinasa / fampiharana izay mandray ny hevitry ny fampidirana manana fotodrafitrasa salama, mavitrika ary mavitrika. Eny, ny sasany mavitrika kokoa noho ny sasany, fa ny ankamaroan'ny orinasa izay manaiky ny hevitry ny fifandraisana dia manana tobim-pahalalana te hampifandray. Fa maninona no zava-dehibe ny fitadiavana fampiharana manana an'io volo-piarahamonina io? Satria ny ankamaroan'ny rindranasa manana an'io koa dia miverimberina amin'ny fampiharana azy ireo, mihaino ny hevitry ny mpanjifa, ary amin'ny ankapobeny dia manana aingam-panahy hanohizana mitazona sy mampitombo io tobin'ny mpampiasa io. Fampiharana marobe mijanona tsy mijanona na miverina indray mandeha na indroa isan-taona fotsiny. Te hahita fampiharana izay manatsara sy mamoaka fampidirana vaovao tsy tapaka ianao, amin'izay hanokatra fotoana bebe kokoa.
Tsy ireo ihany no zavatra tadiavina fa raha ny zavatra niainako dia milaza mariky ny fampiharana tsara izy ireo. Ny fampiharana mitambatra dia afaka manampy anao hamonjy fotoana, vola ary aretin'andoha. Ny fikasana hanangana ilay unicorn dia iraky ny adala, indrindra rehefa afaka mahita rindrambaiko miharo volo vitsivitsy ianao izay mamaha ny ankamaroan'ny zavatra ilainao.
Ampahafantaro anay ny sasany amin'ireo fampiharana tafiditra tianao eto ambany.
Manomana ny paikadin'ny mailaka fialantsasatrao
25 Septambra 2012 à 9:16
Gaga foana aho amin'ny teny nalaina sy ny fandaharam-potoana omen'ny mpanjifanay indraindray ny ekipan'ny IT ao amin'ny tetikasa sasany. Tsy afaka niteny tsara kokoa ianao… mora kokoa noho ny hatramin'izay ny rindrambaiko azo antoka, azo antoka ary matanjaka.